obi ike Leadership — njem Lee - Official Site
A bụ MLK si obi ike na-edu ndú na ngosi (tinyekwara ụfọdụ ndị kasị mma ide m na mgbe na-agụ). Ọ jụ makụọ ezighị ezi n'iwu ma na-ajụ ndidi chere. Ọ bu ụzọ na nnọchite nke a dum agbụrụ nke ndị mmadụ. Dị ka a nwa nwoke, Na na na ekele miri emi n'ebe Chineke maka ihe nke ọ rụpụtara site n'aka ya. Na dị ka a Christian, Achọrọ m ọgụ ka ikpe ziri ezi dị nnọọ ka ike dị ka o me, eburu n'uche na ọ bụ nanị Jizọs nwere ike mee ka ikpe ziri ezi. Ọ ga-.
Nke a bụ otu ihe kwuru si MLK ma ama akwụkwọ ozi. Ị kwesịrị ị na-agụ dum ihe mgbe ị na-enweta ohere.
"Anyị i echere ihe karịrị 340 afọ maka anyị n'usoro iwu ochichi obodo na Chineke nyere ikike. Mba nke Asia na Africa na-akpụ akpụ na jetlike ọsọ na-eduga n'inwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị onwe, ma anyị ka creep na ịnyịnya na-adọkpụ ijeụkwụ n'inweta iko kọfị na a nri ehihie counter. Ikekwe ọ dị mfe maka ndị nweghị mgbe ndị agba ube agha nke segregation ikwu, "Chere." Ma mgbe unu hụrụ na ajọ ìgwè na-eme lynch gị nne na nna na uche na mmiri iri gị ndị nwaanyị na ụmụnna na whim; mgbe ị hụrụ ịkpọasị jupụtara uwe ojii akọcha, agaghịkwa na ọbụna gbuo gị nwa nwoke na ndị nwanyị; mgbe ị na-ahụ ọgụgụ ka ukwuu nke gị iri abụọ nde Negro ụmụnna akpagbu ọnọdụ na-airtight onu nke ịda ogbenye n'etiti ọgaranya otu; mgbe ị na mberede ahụ gị na ire gbagọrọ na ị na-ekwu stammering dị ka ị na-achọ ịkọwara gị isii afọ nwa ihe mere o nwere ike ghara ịga ka ọha na eze ogige ntụrụndụ na ka e advertised na telivishọn, na-ahụ anya mmiri na-eju ya anya mgbe ọ na-gwara na Funtown a na-emechi ka acha ụmụ, na-ahụ na-eyi egwu n'ígwé ojii nke ịdị ala na-amalite na-etolite na ya obere iche echiche igwe, na-ahụ ya amalite ịgwagbu àgwà ya site na-emepe emepe na-amaghị ihe ọ bụla obi ilu n'ebe ndị ọcha; mgbe ị na-concoct azịza maka a ise afọ nwa na-arịọ: "papa, gịnị mere ndị ọcha na-emeso acha mmadụ nke mere pụtara?"; mgbe ị na-a cross asị mbanye na ọ na-ehi ụra n'abalị mgbe abalị na-ata nkuku nke ụgbọala n'ihi na ọ dịghị ụlọ ndina ga-anabata gị; mgbe ị na-wedara ụbọchị na ụbọchị site nsogbu ịrịba ama na-agụ "na-acha ọcha" na "acha"; mgbe gị mbụ aha-aghọ "nigger,"Gị n'etiti aha-aghọ" nwa na-enweghị " (Otú ọ dị ochie ị bụ) na aha ikpeazụ gị na-aghọ "John,"Na nwunye gị na nne na-mgbe nyere na-akwanyere ùgwù aha ahụ bụ" Oriaku "; mgbe ị na-harried n'ehihie na anọgidewokwa na-anyụ n'abalị site n'eziokwu ahụ bụ na ị bụ onye na Negro, ndụ mgbe na tiptoe stance, mgbe ezi maara ihe na-atụ anya ọzọ, na na-enwe obi iru-atụ egwu na elu iwesa ha iwe; mgbe ị na-ruo mgbe ebighị ebi na-alụ ọgụ a ekosa echiche nke "nobodiness" -then ị ga-aghọta ihe mere anyị na-esiri ike na-eche. E-abịa oge mgbe cup of ntachi obi na-agba ọsọ n'elu, na ndị ikom na-aba dịkwa njikere ka a nọrọ abis nke obi nkoropụ. Atụrụ m anya, Ndị nwe, ị pụrụ ịghọta na anyị ziri ezi na-apụghị izere ezere enweghi ndidi. Na i gosi ihe dị ukwuu nke inwe nchegbu maka njikere anyị dị agbaji iwu. Nke a bụ nnọọ a ziri ezi nchegbu. Ebe ọ bụ na anyị otú ịdị uchu na-agba ndị mmadụ irube isi Ụlọikpe Kasị Elu kpebiri nke 1954 obere segregation na ọha na eze na ụlọ akwụkwọ, ke akpa ilekiri o nwere ike iyi kama paradoxical anyị consciously imebi iwu. Otu nwere ike ịjụ: "Olee otú ị pụrụ akwadokwa ọchịchị na-agbasa ụfọdụ iwu na-erube isi ndị ọzọ?"Azịza ya dabeere na eziokwu na e nwere mmadụ abụọ na ụdị iwu: dị nnọọ na-ezighị ezi. M ga-akpa na-akwadokwa ọchịchị irube isi nanị iwu. Onye nwere ọ bụghị nanị na a iwu ma a ibu ọrụ n'ụzọ omume irube isi nnọọ iwu. ọzọ, onye nwere a ibu ọrụ n'ụzọ omume nupụrụ ezighị ezi n'iwu. M ga-ekweta na St. Augustine na "-ezighị ezi n'iwu Ọ dịghị iwu na niile."
-Martin Luther King Jr., Akwụkwọ Ozi si a Birmingham nga
BornWithPurpose • August 19, 2013 na 8:33 Abụ • zaghachi
Nke a bụ ndị dị otú ahụ na-akọwa mmadụ ilekiri nke ihe ikpa oke ele anya dị ka. Ọ bụ ọbụna ihe ịma aka na-eche na-ezighị ezi nke na n'ókè-adịghịzi ọbụna otu narị afọ gara aga. MLK bụ ihe ịrịba fighter na mkpali Chineke jiri. Otu n'ime ndị kasị amasị m ruturu niile oge…. ” Ọchịchịrị nwere ike anapughi n'aka ọchịchịrị, naanị Light nwere ike ime na. Asì nwere ike anapughi n'aka-akpọ asị, naanị Ịhụnanya nwere ike ime nke ahụ.”
-Martin Luther King Obere.
Sean • August 19, 2013 na 8:33 Abụ • zaghachi
Mgbe na-amalite a ahiriokwu na a njikọ ka 'ma', ma ọ bụ 'dị ka'.